दैनिक हिंड्नुको १२ फाइदा के के हुन ? जानी राखौं – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / दैनिक हिंड्नुको १२ फाइदा के के हुन ? जानी राखौं
दैनिक हिंड्नुको १२ फाइदा के के हुन ? जानी राखौं
admin October 21, 2021 स्वास्थ्य Leaveacomment 70 Views
दैनिक रुपमा हिंड्नु स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले निकै राम्रो हो । नियमित हिंड्नुको अनेक फाइदा छन् । टेनेसी विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनमा पनि नहिड्नेभन्दा हिड्ने महिलामा शरीरमा बोसो काम भएको पाइएको थियो । हिड्दा शरीरमा रगत जम्न पाउँदैंन र मुटु रोग पनि लाग्न पाउँदैंन । विशेषगरी आर्थराइटिसका बिरामीका लागि हिड्नुका धेरै लाभदायी हुन्छ । यसका फाइदा के–के छन् ?
Previous फेरि पनि सिन्धुपाल्चोकमा…..?
Next फेसबुकले नाम परिवर्तन गर्ने, एक सातामै हुँदैछ निर्णय